ICranberry | Ukutya kukaNutri
UPaü Heidemeyer | | Ukutya, Ukutya
Oku kutya kuncinci kunendawo yayo yangaphakathi eqaqambileyo eluncedo kakhulu emzimbeni, ukulunywa okumnandi okuncinci ingayiphucula kakhulu impilo.
Ukuba awuzazi izibonelelo zecranberries, qhubeka ufunda le migca kuba siza kukuxelela ukuba bangakukhathalela njani kwaye baphucule impilo yakho.
Banikezela ngezibonelelo ezibalulekileyo zokutya izondlo zingahoywanga. Ezi ziqhamo zibomvu zinika incasa emuncu kodwa zikwaswiti, nangona iiblueberries esizazi ngcono ziluhlaza okomnyama phantse kumnyama.
I-Lingonberries zihambelana ngqo ne iingxaki ezinxulumene nesinyi kunye nosulelo lomchamoNangona kunjalo, banokusinceda kwezinye iinkalo ngokubanzi zempilo yethu.
1 Izibonelelo zeCranberry
1.1 Ziyakuthintela ukuphazamiseka komchamo
1.2 Ukunciphisa umngcipheko womhlaza
1.4 Indalo echasene nokudumba
1.5 Iphucula ukubona kwamehlo
1.6 Ukutya okuchasene namanqatha
1.8 Yehlisa isifo seswekile
1.9 Yonyusa amanqanaba e-cholesterol elungileyo
1.10 Imisebenzi yakho yokuqonda kunye nenkumbulo iya kwanda
I-Lingonberries zididekile kunye neeblueberries zikholelwa ukuba ziya kungcamla ngokufanayo, nangona kunjalo, Oku kumuncu ngakumbi kwaye kune asidi. Inkangeleko yayo iyafana, isindisa umahluko kumbala. Iiblueberries eziqhelekileyo zimnandi kwaye ziluhlaza, ukongeza, zinokutyiwa ngokuthe ngqo, kwelinye icala, ezibomvu zencasa yazo, zithathwa zilungisiwe.
Akuqhelekanga ukubafumana kwiivenkile njengeemveliso ezintsha, kuba ayisiyomveliso esetyenziswa kakhulu. Nangona kunjalo, kwiivenkile ezizodwa zemveliso
Emva koko siyakuxelela Unokukunceda njani i-cranberries?
Ziyakuthintela ukuphazamiseka komchamo
Zanele xa kuziwa thintela okanye unciphise usulelo lomchamo, kwaye oku kungenxa yemali yayo enkulu ye-antioxidants. Akufanele silibale ukuba ezi blueberries zizityebi kwiitannins ezibonelela ngeenzuzo ze-antibiotics ezisinceda ukukhusela olu hlobo losulelo.
Ukunciphisa umngcipheko womhlaza
Umhlaza okwangoku sesinye sezifo ezoyikwa kakhulu ngabantu, sinokuhlasela naliphi na ilungu lomzimba kwaye ngokuxhomekeke kwinqanaba lokukhula sisifo esibulalayo.
Ukusetyenziswa kwe-cranberry, njengokutya okunye okuninzi kwendalo, kunokusetyenziswa njengesixhobo sokuthintela Gcina umhlaza. Kuyanceda ukulwa umngcipheko wokwanda kweeseli zomhlaza xa zimbalwa, ukongeza, ayonakalisi ezinye iiseli.
Amakhompawundi kwii-lingonberries anazo proanthocyanidins, Izinto ezinceda iziganeko ezingaqhelekanga kunye nokuphucula impilo ngokubanzi. Bayalibazisa ixesha lokuguga kolusu ngokususa ii-radicals zasimahla kunye nezenzo zabo kulusu. Ke ngoko, ukuba ufuna ukubona ulusu lwakho lungcono, ungayeki ukuthatha ii-cranberries.
Indalo echasene nokudumba
I-Cranberry inexabiso elikhulu lee-antioxidants, kunye ne-anti-inflammatories. Ke ngoko, kuthiwa iluncedo kakhulu ukunciphisa ezinye izifo ezinje ngesisu esidumbileyo, igesi, ukuqina, iintlungu zemisipha, iintlungu zokuya exesheni, njl.
Iphucula ukubona kwamehlo
Ukubona ngokuhamba kwexesha kunokubangela ukonakala okuthile kunye nomonakalo we-oxidative, izicubu ze-retina zelihlo lesaziso zinokonakala ngokulula. Ngesi sizathu, sikucebisa ukuba utye ii-cranberries ukuze ii-anthocyanins zikuncede ekuthinteleni lo monakalo wamehlo.
Ukutya okuchasene namanqatha
Ukuba ujonge ukunciphisa umzimba, unokwandisa ukusetyenziswa kweecranberries ekudleni kwakho. Ziqulathe ifayibha kwaye aziboneleli ngeedosi eziphezulu zeekhalori. Isiqhamo esisempilweni onokuyisebenzisa ukulawula ukusebenza kwamathumbu kwaye kukuncede uzive uhlaziyekile ligalelo elikhulu lefayibha.
Benza ngathi neuroprotective, Umxholo wayo ophezulu wee-antioxidants. Ukongeza, i-gallic acid isebenza ngokwandisa amandla enkqubo ye-neuronal.
Ukuthintela izifo ezifana I-Alzheimer's, iParkinson's echaphazela ngokuthe ngqo ukukhula kwendalo kunye nokuqhelekileyo kokusebenza kwengqondo.
Yehlisa isifo seswekile
Ukusetyenziswa kwe-cranberry kunokusinceda ukuphucula uvakalelo lwe-insulin kwabanye abantu abatyebe kakhulu ezinganyangekiyo kule hormone. Ilwa nesifo seswekile kwaye inceda umzimba ukuba wenze i-carbohydrate ngokuchanekileyo, oko ke kuthintela iswekile yegazi ekukhuleni kakhulu.
Kwakhona, Unceda ukukhusela i-spikes yeglucose yegazi, ukuphucula impendulo ye-insulin emzimbeni. Ngale ndlela, izondlo zihanjiswa ngcono kwaye igazi lijikeleza ngaphandle kweengxaki. Ukuthintela ukuqokelelana kwecholesterol egazini nakwimithambo.
Yonyusa amanqanaba e-cholesterol elungileyo
Njengoko uyazi, zikhona Iindidi ezimbini ze-cholesterol, i-HDL elungileyo, okanye i-LDL embi. Kule meko, ii-lingonberries zinceda ukuphelisa i-cholesterol embi kunye nokwandisa amanqanaba e-cholesterol elungileyo.
Imisebenzi yakho yokuqonda kunye nenkumbulo iya kwanda
Si buscas ukwandisa amandla akho okuqonda Zama ukusebenzisa izixa ezongezelelekileyo ze-cranberries, ukongeza, ziya kukunceda ukuphucula imemori yakho kunye namandla akho. Ukuthatha iziqhamo kukwavumela ukuphucula iinkqubo zokufunda kunye nememori ngokubanzi.
I-cranberries ebomvu kukutya onokukufumana zombini kwiimveliso zendalo, kwiziselo okanye kwiifomsile. kunye nezibonelelo zomzimba.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukutya kukaNutri » Ukutya » I-cranberry ebomvu